Netease Youdao အဘိဓါန် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Netease Youdao အဘိဓါန်
Netease Youdao အဘိဓါန် APK ကို
အင်တာနက်ကိုအသက်အရွယ်အတွက် Netease Youdao ကတီထွင် Youdao အဘိဓါန်, ကျော် 500 သန်းအသုံးပြုသူများနှင့်အရှိဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့, အခမဲ့, အစွမ်းထက်ဘာသာပြန်ချက် software နှင့်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးအဘိဓါန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အလွယ်တကူပင်အော့ဖ်လိုင်းစကားလုံးတစ်လုံးတက်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု, 650,000 အင်္ဂလိပ်တရုတျစကားများနှင့်တည်ဆောက်ထား 590,000 တရုတ်-အင်္ဂလိပ်စကားများထက် ပို. ထက်ပိုမိုနှင့်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲမှာဘာသာပေါင်းစုံဘာသာပြန်ချက်အဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော "အွန်လိုင်းဆိုချက်" ၏သီလအားဖြင့်, Youdao အဘိဓါန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိနာမည်ကျော်ဝေါဟာရတို့ကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်ဥပမာစာကြောင်းများကြီးမားပမာဏ။ အဘိဓာန်ရန်နှင့်အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပြင်သစ်နှင့်တရုတ်ထံမှဘာသာပြန်ချက်ထောက်ခံပါတယ်နှင့် Collins COBUILD အဆင့်မြင့်စာသင်သားရဲ့ English အဘိဓါန်နှင့် The 21st ရာစု Unabridged အင်္ဂလိပ်-Chinese အဘိဓါန်အပါအဝင်ဖုံးလွှမ်းရန်အဖုံးကနေအများအပြားသော authoritative အဘိဓါနျထဲမှာကြာပါသည်။ မူရင်းဗီဒီယိုများထံမှပေါများအွန်လိုင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာစာကြောင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပြီးကြောင့်စုစုပေါင်း 30 သန်း entries တွေကို (အတည်ပြုခဲ့သည်) နှင့် 23 သန်းဥပမာစာကြောင်းများပါရှိသည်။ အဆင်ပြေ "ကင်မရာကိုဘာသာပြန်စာပေ" ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်လျင်မြန်စွာလက်ကစာရိုက်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးစကားလုံးများ၏ရှင်းပြချက်အရနိုငျသညျ။ အွန်လိုင်းဝေါဟာရစာအုပ်နှင့်အဘိဓာန်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာဗားရှင်းအကြားရီးရဲလ်အချိန်ထပ်တူသင်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုစကားများသင်ယူဖို့ဖွ! နောက်ဆုံးပေါ်အတွက် add-on, ဂရပ်ဖစ်အဘိဓါန်, ဝေါဟာရသင်ယူခြင်းတစ်စနစ်တကျနှင့်အမြင်အာရုံနည်းလမ်းကိုတင်ပြသွားပါသည်။ နောက်ထပ်အတွက် add-on, Youdao စာသင်ခန်းအသုံးပြုသူများကဲ့သို့သောပြောဆိုသည်အင်္ဂလိပ်စမ်းသပ်ခြင်း, လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ CET-4 & CET-6, NEEP, TOEFL, IELTS, GRE နှင့် GMAT အဖြစ်စာမေးပွဲများပွငျဆငျခွငျးကိုကူညီသင်တန်းများနှင့်ကြွယ်ဝသောသင်ယူမှုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုပေးစွမ်းသည်။
- အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပြင်သစ်နှင့်တရုတ်ရရှိနိုင်ပါသည်ရန်နှင့်ထံမှဘာသာပြန်စာပေ;
- စကား၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ: 650,000 အင်္ဂလိပ်တရုတျစကားများနှင့် 590,000 တရုတ်-အင်္ဂလိပ်စကားများထက်ပို 23 သန်း, example sentences, နှင့် built-in Collins COBUILD အဆင့်မြင့်စာသင်သားရဲ့ English အဘိဓါန်ထက်ပို;
- ထူးခြားသော "အွန်လိုင်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်" အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသစ်နှင့်ပူစကားလုံးများကိုတို့ကိုစုဝေးစေ။ ဒါဟာမျိုးစုံ input ကို Modes သာပေးသည်, ထိုထူးခြားသော "ကင်မရာကိုဘာသာပြန်စာပေ" သင်လက်ဖြင့်သူတို့ကိုစာရိုက်စရာမလိုဘဲစကားများတက်ကြည့်ဖို့ဖွ;
- "ဇာတိအသံထွက်" သင်အင်္ဂလိပ်၏ဇာတိအသံထွက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြု, စကားလုံးအသံထွက်, ဥပမာဝါကျအသံထွက်နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဇာတိစပီကာများကအသံထွက်ထောက်ခံပါတယ်;
- "Discovery Channel ကို" ဒါကြောင့်အပေါ်ပါးစပ်အင်္ဂလိပ်ဖုံးအုပ်ကြွယ်ဝသောသင်ယူမှုအကြောင်းအရာ, အွန်လိုင်းသင်တန်းများ, ဝေါဟာရစာအုပ်နှင့်လည်းပါဝင်သည်;
- "တရုတ်စွယ်စုံကျမ်း" တစ်ခုတစ်နေရာတည်းမှာအသိပညာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်;
- "Youdao စာသင်ခန်း" လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ CET-4 & CET-6, NEEP, TOEFL, IELTS, GRE နှင့် GMAT အသုံးပြုသူများကဲ့သို့သောပြောဆိုသည်အင်္ဂလိပ်စမ်းသပ်မှုအဖြစ်စာမေးပွဲများပွငျဆငျခွငျးကိုကူညီသင်တန်းများနှင့်ကြွယ်ဝသောသင်ယူမှုအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုပေးစွမ်းသည်။
Netease Youdao အဘိဓါန်
36.76 ကို MB
ချစ်ခင်ရပါသော Translate - ...